Nigranee | » यस्तो होला भन्ने सोचेको थिएन युवती साथीको कोठामा जाँदा ! यस्तो होला भन्ने सोचेको थिएन युवती साथीको कोठामा जाँदा ! – Nigranee
निगरानी October 22, 2019 75
काठमाडौं / एक १९ वर्षकी किशोरीले दावी गरेकी छिन् कि जब उनी रातमा एक युवकको कोठामा गइन् त्यही बेला अचानक युवकका अन्य ११ जना साथीहरु आए र सबैले करणी गरे । घटना साइप्रसको हो, जहाँ बेलायती कशोरी एक सस्तो रिसोर्टमा बसेकी थिइन् । किशोरीले आफू एक युवकसँग कोठामा भएको स्वीकार गरेकी छिन् । किशोरीको उजुरीपछि सबै १२ जना युवकविरुद्ध करणीको मुद्दा चलाइएको छ । आरोपी सबै युवकहरु इजरायलका हुन् । किशोरीका अनुसार ती युवकहरुले उनी बे’होस भएपछि मात्र छोडेका थिए । किशोरीको श’रीरमा चो’टका कैयौं निशान पाइएका छन् । किशोरी साइप्रसको अयी नपा शहरमा पेम्बोस नपा रक्स होटलमा बसेकी थिइन् ।
घटना होटलको दोस्रो तलाको त्यो कोठामा भयो जहाँ इजरायली युवक आफ्ना दुई साथीहरुसँग बसेका थिए । किशोरीका अनुसार रातको १ बजेसम्म ती युवकहरुले उनलाई छोडेनन् । किशोरीका अनुसार उनले आफूसँग सुरुमा भएका युवकसँग भने शा’रीरिक सम्बनध बनाइसकेकी थिइन् । पुलिसले सबै युवकहरुलाई पक्राउ गरेको छ । युवकहरुलाई बिहीबार अदालतमा पेश गरियो । पुलिसले डिएनएको जाँच रिपोर्ट पर्खिरहेको छ । स्थानीय मिडियामा एक युवक र पीडित युवतीको इन्स्टाग्राम म्यासेज पनि प्रकाशित गरिएको छ । पुलिसका अनुसार किशोरी नयाँ होटलमा सरेकी छिन् र उनलाई काउन्सिलरको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । बेलायती दूतावासले पनि किशोरीसँग सम्पर्क गरेको छ ।